Akụrụngwa na Ngwa Na-edebe M n'ahịa | Martech Zone
Onwa isii gara aga abụrụ m nsogbu dịka m bidoro azụmahịa nke m. Nnukwu ihe ịma aka bụ cashflow… ị ngwa ngwa chọpụta na ọ bụ ezie na ị na-arụsi ọrụ ike, ego apụtaghị na ọnụ ụzọ. N'ihi ya, m na-agba ọsọ ọsọ ma na-eche. Enwebeghị m ịzụ ahịa n'ezie maka ọfịs n'oge a.
Echere m na m ga-ekekọrịta ndakpọ nke ngwá ọrụ m nke ahia. Enweghị m ihe ọ bụla pụrụ iche na n'ezie na-arụ ọrụ iji na-akwụ ụgwọ dị ka ala dị ka o kwere.
MacBookPro - Enweghị m ihe kachasị ọhụrụ, mana nke a bụ igwe ọrụ m. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ụdị ọhụụ, mana m na-ewepụ mmefu ahụ nwa oge. My Mac na-agba agụ owuru brilliantly ma nko elu a abụọ abụọ ileba anya na ọ na-abịa a screeching kwụsị. Nke a ga-abụ mmefu ego m kachasị ukwuu na 2010 ka m na-ele anya iji kwalite.
Extra cord maka MacBookPro m - laptọọpụ ọ bụla kwesịrị ịnwe ma ọ dịkarịa ala eriri 2… otu ịhapụ na-arụ ọrụ na otu iji debe akpa gị! Oge!
Western Digital 250Gb USB Mbanye - nke a bụ nchekwa m bụ isi maka data ndị ahịa, nke m na-akwadokwa na ntanetị. Ọ ga-amasịkwa m ịnweta Oge Capsule maka ụlọ ọrụ ụlọ.
Nwaada 8330 - ekele Adam maka ịkwado ekwentị a. Ọkara ụbụrụ m dị na ekwentị a. A na-emekọrịta ya Ngwa Google, nwere igwefoto, Evernote, Twitter, Facebook na ọbụna Foursquare ugbu a na ya.
Tụgharịa Mino HD - inweta obere vidiyo bụ ihe ịma aka nye nwa okorobịa na-ede ọtụtụ ihe, mana nke a bụ igwefoto HD kacha elu maka ọrụ ahụ! Jikọtara na iMovie na Camtasia maka Mac - Ime ihe nkiri enweghị ike ịdị mfe.
Igwe okwu Blue Snowflake - M dere a ole na ole n'ihu na audio E na a mic na ọ bụ kediegwu. Dị mma karịa igwe okwu laptọọpụ ndabara!
Earbuds nke Sony - jikọtara ya Pandora si desktọọpụ desktọọpụ (ụgwọ ọrụ), ị nweghị ike ịgahie ihe na ndị a. Ha na-akagbu ihe niile.
Ogio akpa ozi site na eBags. Akpa a (ụdị Hip Hop) abụghị ihe dị mkpụmkpụ nke ọnwa dị egwu of ọnwa isii nke ịdọrọ, tụghasị, ma tie aka na ọ ka dị ọhụụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na eriri ubu nwere swivel, n'agbanyeghị.
iPod Touch - M ka na-egwu na ngwa niile, ụmụ okorobịa. Enwere m ike ịnye ụmụaka a otu ma nweta ụdị ọhụụ, n'agbanyeghị… Bill agwa m na ndi ohuru nwere igwe okwu!
Freshbooks - Akwụkwọ ọnụahịa ndị ahịa m niile na-eme na Akwụkwọ ọhụrụ. M ugbu a nwere 2 ndị enyi ndị ọzọ na-eji ya… ọ bụ ihe dị egwu Software dị ka a Service ngwọta maka ijikwa gị ahịa.
Dropbox - Ruo ugbu a, nke a abụwo nkwado kachasị mma n'ịntanetị na usoro njikwa faịlụ m ji. Ejikọtara ya na OSX na Windows maka ịdọrọ na dobe mfe. Enwere m ọtụtụ ndị enyi na-eji ya ma anyị na-ebufe faịlụ ndị ahịa buru ibu na-adị mfe.
Ngwa Google maka Ozi - ihe ndị ọzọ eji eme ọfụma bara uru ma e jiri ya tụnyere Office (ndo Google), mana ngwa Google bara uru $ 50 / yr pricetag naanị maka email azụmahịa. Ikike m mekọrịta ma jikwaa ọtụtụ email na kalịnda ngwa dị egwu.
My Ntinye 1 nke 2009 bu, n'enweghi obi abua, Osisi. Anọ m na-ezute onye ọzọ ụbọchị ọzọ na-ekwu maka ugboro ole ha na ekwentị na email na-anwa ịtọọ oge. Tungle na-eme ka ọ dị mfe nghọta. Ọ na - emekọrịta na kalenda Google yana - yana oge ọbụla m nwere njehie usoro ihe - ọ na - abụkarị na anaghị m edekọ ya nke ọma.
Tags: pịa mgbasa nkesaọnụ ọgụgụshareshare bọtịnụshareable ọdịnaya
daalụ maka ozi!